Ukuqonda indlela 'yokuBaluleka okuKhethekileyo' Iziphumo zokugwetywa
Xa igqwetha likaScott Peterson libuyisela isigwebo sokubulala umfazi wakhe uLaci Peterson kunye nokufumanisa imeko ekhethekileyo, kwakuyisiginiselo sasohlwayo esiya kuphakamisa kwisigaba sokugwetywa kwetyala.
Ngaphantsi komthetho waseCalifornia, umntu ofunyaniswe enetyala lokubulala kwisiganga sokuqala unokuhlawulwa ngokufa, ukuvalelwa entolongweni yaseburhulumenteni ubomi obungenakho ukufumana isigwebo , okanye ukuvalelwa entolongweni yaseburhulumenteni iminyaka eli-25 ebomini.
Nangona kunjalo, ukuba igosa lifumanisa ukuba ukubulawa kwenziwa phantsi kweemeko ezikhethekileyo, isohlwayo esisodwa kukufa okanye ubomi ngaphandle kokuba kubekho ukugqithiswa.
Ngamanye amazwi, xa igosa libuyisele ukufumanisa ukuba uScott Peterson wabulala umfazi wakhe uLaci phantsi kweemeko ezikhethekileyo, kwasusa nayiphi na ithuba lokuba uScott uza kuphuma entolongweni.
Iziphumo ezahlukeneyo zeemeko ezizodwa
Ikhowudi yaseCalifornia ibonisa iziphumo ezi-22 ezifunyanisiweyo kwiimeko ezikhethekileyo phantsi kokuba ummangalelwa efunyanwa enetyala. Kwiimeko zeScott Peterson, imeko ekhethekileyo esetyenziswayo kukuba "ummangalelwa wafunyanwa enetyala elingaphezu kwelilodwa lokubulala kwinqanaba lokuqala okanye lesibini."
Ngenxa yokuba igosa lifumene ukuba uPeter wenza inecala lokubulala kwisibini kwindlela yokubulala unyana kaLaci ongakazalwa, u- Conner, bakwazi ukubuyela kwiimeko ezikhethekileyo zokubulala zombini.
Abanye ababukeli beenkundla babekholelwa ukuba ukufunyanwa kwejaji yokubulawa kwesibini ngokubulawa kukaConner kwakungumqondiso wokuba bebanqwenela ukucebisa isigwebo sokufa sikaPeterson.
Ngokufumana iimeko ezikhethekileyo zokubulala uLaci, ijaji yachithwa nayiphi na ithuba lokubhaliweyo kwaye ngoko kubonakala sengathi zikhokele ekugwebeni iPetererson ukuya ebomini bakhe bonke entolongweni.
Nangona kunjalo, abanye ababukeli babecinga ukuba igosa liyazi kakuhle oko lenzayo ngokufumana uPeterson unecala lokubulala, okokuqala ngenxa yokuba yongezelela isigwebo sokufa njengesigwebo esinokwenzeka.
Ukuba abazange bafune ukuqwalasela isigwebo sokufa, babenokumfumana enetyala lokubulala ngokuphindwe kwesibini ekufeni kukaLaci kwaye baya ekhaya.
Ngakolunye uhlangothi, ukuba beyifumene enetyala lokubulala umgangatho wesibini kumabini omabili, uScott Peterson wayeza kufumana ilungu le-parole.
Ngaphantsi komthetho waseCalifornia, ukubulala kukungabikho komthetho ukubulawa komntu, okanye umntwana okhulelweyo, kunye nokukhwabanisa kwangaphambili. Ukwahlula phakathi kokubulawa kweyure kunye neyesibini kwilesi sifo kukuthi ukubulala kwangokuqala kukuzikhethela kunye / okanye kulungiselelwe.
Abanye abatapheli beentendelezo bathi i-jury ingacinga ukuba ukufa kukaLaci kwakubangelwa yimpikiswano okanye ukulwa nalo mbhangqwana ubekho ngaphambi kweKrisimesi 2002 kwaye uScott mhlawumbi wayebulele uLaci enomsindo ngaphandle kokucinga ukuba wayembulala umntwana ongakazalwa. Ngako oko, igosa lifumene ukubulala kwangesibili kwimeko yeConner.
Nangona kunjalo, ukuba ijaji ikholelwa ukuba ukufa kukaLaci kwaba ngumphumo wempikiswano eyaphuma, babengenakubuyisela isigwebo sesigqibo sokuqala, ukubulawa kwangaphambili. Ijury ngokuqinisekileyo yayikholelwa inkolelo yenkohlakalo yokuba uPeterson wayecwangcise ngokucophelela ukubulawa komfazi wakhe okhulelwe.
Ukuba i-jury ikholelwa ukuba uScott Peterson ucebe ukubulala u-Laci, kutheni abazange bafumanise ukuba wayecwangcise nokubulala kwakhe uConner?
Kukho i ngcaciso. Kungenzeka ukuba abanye kwindoda yesithandathu, i-jury yowesifazane wesithandathu inengxaki yokugweba nabani na ukubulawa komntwana ongakazalwa.
Nangona iCalifornia, njengamanye amazwe amaninzi, idlulisela umthetho ngokukodwa ukubulala ukubulawa komntwana, mhlawumbi kwakukho i-jury ye-Peterson eyayikholelwa ukuba umntwana akayena mntu ade azalwe. Amaninzi amaninzi okukhupha isisu aphikisana nomthetho omtsha wokukhusela umthambo ngenxa yokuba bakholelwa ukuba unokuphazamisa isikhundla sabo sokuba umntwana akayena "umntu" ade azalwe.
Ukuba kukho iijurors kwiphaneli yasePetererson eyayinombono ofanayo, kungenzeka ukuba kunzima kubo ukuba bathathe uPetererson unecala lokubulala uConner, nangona umthetho waseCalifornia.
Isigqibo sesibini kwisigqibo sokubulawa kukaConner, ngoko ke, isenokungqinelana nokubhenca abo bameli.
Ngaphandle kwesiqinisekiso sokufa kukaConner, i-jury ayinakukwazi ukufumana iimeko ezikhethekileyo ekubulaweni kukaLaci kunye nokususa ithuba lokuxolela uScott Peterson.
Enye Imbono yeSigqibo:
U netyala NjengeSono
Inkolelo yokubulala ngokuphindaphindiweyo kufuneka inike i-America isikhashana ukuba iqwalasele imbonakalo ye-schizophrenic yomthetho njengoko isebenza e-United States, kunye nembono wethu ngomntwana ongakazalwa esibelethweni.
I-Libra Ngothando: Ukudibanisa kweZodiac
Ukulungiselela i-CCNA Exam
"Ulwaphulo lwe-Romeo noJuliet"
Indlela yokuLibhalisa i-Alphabeti Uluhlu kwi-Microsoft Word
Ukujonga Ubomi Bomntu Wama-Oprah Winfrey
Iimpawu zokuGubula ngeNdleko kunye nokuQeqesha: Uphukile phantsi kweNqanaba lokuPhucula
I-10 ye-Reggae Pop Songs
Ulwaphulo lwezilwanyana kwiiCccuses
Ipol Pot, I-Butcher yaseCambodia
Ukukhetha Ubugcisa njengomsebenzi